လူသားတွေဟာမပါဘဲမတည်ရှိနိုင် သင်္ကေတ ။ အရာဝတ္ထုနှင့်သဘောတရားများကိုဤကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ကိုမဟုတ်ရင်မဖြစ်နိုင်ပါနည်းလမ်းအမှုအရာများနှင့်စိတ်ကူးများအကြားဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ခွင့်ပြုပါ။ အမေရိကန်အလံ, သင်တန်း, သင်္ကေတဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အရာ၏သင်္ကေတ, ဤမေးခွန်းများကိုမှအဖြေ၏မီးလောင်ရာသို့မဟုတ် desecration မှုပိတ်ပင်သည့်ဥပဒေများကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်အကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏စိတ်နှလုံးမှာ အမေရိကန်အလံ ။
တစ်ဦးကသင်္ကေတ (စသည်တို့ကိုတစ်ခုအရာဝတ္ထုတစ်ခုအယူအဆ) အခြားအရာတစ်ခုခုကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ကေတများလူများကထိုလမ်းဆကျဆံဖို့သဘောတူသောကွောငျ့တစျခုအရာသည်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုဆိုလိုသည်သောသမားရိုးကျဖြစ်ကြသည်။ သင်္ကေတအရာကိုကိုယ်စားပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်သောသင်္ကေတအတွက်မွေးရာပါအဘယ်အရာမျှမရှိကြောင်း, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုလိုအပ်သည်သောသင်္ကေတအရာအတွက်မွေးရာပါအဘယ်အရာကိုမျှလည်းမရှိ။
တချို့ကသင်္ကေတလက်ဝါးကပ်တိုင်သညျယရှေု execute ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြလို့ယုံကြည်သောကြောင့်ဥပမာလက်ဝါးကပ်တိုင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏သင်္ကေတဖြစ်တယ်, သူတို့ကိုယ်စားပြုအရာကိုနီးကပ်စွာချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြသည်။ စက်ဝိုင်းအပြတ်အတောက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကိုယ်စားပြုဖို့ထင်သောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံသင်္ကေတနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကကိုယ်စားပြုသည်ဥပမာအားစိတ္တဇဖြစ်ပါတယ်ကြားရှိဆက်သွယ်မှု, တစ်ဦးလက်စွပ်ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုကိုယ်စားပြုဖို့အသုံးပြုသည်။
အချိန်အများစုမှာသျောသင်္ကေတတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုအရာကိုမျှဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူလုံးဝမတရားဖြစ်ပါတယ်။ စကားများအရာဝတ္ထုအဘို့အလိုမင်းထက်သင်္ကေတများဖြစ်ကြသည်အနီရောင် အလံ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၏အဖြစ်ကိုကောင်းစွာရပ်တန့်ဖို့ရှိခြင်းတစ်ခုလိုမင်းထက်သင်္ကေတဖြစ်တယ်, တစ်ဦးရာဇလှံတံတော်ဝင်အာဏာကိုတစ်ဦးမတရားသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။
အနည်းငယ်ကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်ကြိုတင်သူတို့သင်္ကေတသောအရာမှမတည်ရှိသည့်ထူးခြားသောသင်္ကေတကိုရှာဖွေသော်လည်း၎င်းသည်လည်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ရှိကြသည့်အရာနှင့်သင်္ကေတသူတို့ကိုကိုယ်စားပြုကြိုတင်မှတည်ရှိသောစံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလက်စွပ်, ဥပမာ, သူ့ပုပ်ရဟန်းမင်းအခွင့်အာဏာသင်္ကေတမသာပေမယ့်လက်စွပ်မပါဘဲလည်းအာဏာကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, သူထုံးအဖွဲ့တော်တို့ကိုခွင့်ပြုရန်လို့မရပါဘူး။
အလံ Burning ၏သင်္ကေတသက်ရောက်မှု
တချို့ကတဦးတည်းစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာတစ်ခုခုရေးလိုက်နှင့်စကားအားဖြင့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဘာကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့မီးရှို့နိုငျကွောငျး, သင်္ကေတများနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ဥပမာသင်္ကေတများအကြားဆန်းကြယ်မှုများဆက်သွယ်မှုရှိစေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အမှန်တရားအတွက်သျောသင်္ကေတကိုဖျက်ဆီးသင်္ကေတအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဘာဖန်တီးသည့်အခါ မှလွဲ. အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဘာအကျိုးသက်ရောက်စေမထားဘူး။ တစ်ဦးပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလက်စွပ်ပျက်စီးသည့်အခါ, ထိုပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအခွင့်အာဏာအောက်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်များသို့မဟုတ်ကြွေးကြော်ခွင့်ပြုရန်စွမ်းရည်ကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်သည်။
ထိုသို့သောအခြေအနေများချွင်းချက်ရှိပါတယ်။ သငျသညျ effigy အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုမီးရှို့လျှင်, သင်လည်းအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးကိုမီးရှို့ကြပါဘူး။ သငျသညျခရစ်ယာန်တစ်ဦးကိုဖကျြဆီးခဲ့လျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင် , ခရစ်ယာန်ဘာသာသူ့ဟာသူထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်ကိုဆုံးရှုံးလျှင်, ဒီဟာလက်ထပ်ထိမ်းမြားကျိုးကြောင်းဆိုလိုတာ doesnt ။ သင်္ကေတ, mishandled disrespectfully ကုသ, ဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးကြသောအခါအဘယျကွောငျ့လူတွေကိုစိတ်ဆိုးရပါသလဲ? သင်္ကေတပဲအထီးကျန်တ္ထုမဟုတ်သောကြောင့်: သင်္ကေတများသူတို့ကိုနားလည်အသုံးပြုသူလူတွေကိုတစ်ခုခုဆိုလို။
တစ်ဦးသင်္ကေတမတိုင်မီနြတေဲ့သင်္ကေတလျစ်လျူရှုနှင့်သင်္ကေတကိုဖျက်ဆီးအားလုံးတဦးတည်းရဲ့သဘောထားတွေ, အနက်, ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းသင်္ကေတနှင့်စပ်လျဉ်းယုံကြည်ချက်အဖြစ်ဘာကိုကိုယ်စားပြုအကြောင်းကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ။ အဘယ်အရာကိုတဦးတည်းရဲ့သင်္ကေတမှလေးစားမှုနှင့်အတူမသူတို့ပုံဆောငျသောအကြောင်းခံစားမိပုံသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်လမ်းအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များသင်္ကေတတွေကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ကေတသမားရိုးကျကြောင့်ထို့အပွငျ, တစ်ဦးသင်္ကေတအဓိပ်ပာယျကလူကပြန်ပြောပြဘယ်လိုကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ် ။ ပိုလူများ, တလေးတစားကြောင့်ကောင်းသောအရာကိုကိုယ်စားပြုဖို့မဝင်စေခြင်းငှါပိုနေတဲ့သင်္ကေတစှာဆကျဆံ; ပိုကလူ disrespectfully သင်္ကေတဆက်ဆံပါ, ပိုကအပြုသဘောသူတွေကိုကိုယ်စားပြုအနုတ်လက္ခဏာအမှုအရာသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုယ်စားပြုလာနိုငျသညျ။
ဘယ်သော်လည်း, ပထမဦးဆုံးလာသလဲ ဒါကြောင့်ပြီးသားအပြုသဘောဆောင်သောအရာတို့ကိုကိုယ်စားပြုရန်စဲဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်လူများကပြုမူဆက်ဆံသို့မဟုတ်လူတွေအဘယ်သို့၏အပြုသဘောဆောင်သောအရာတို့ကိုကိုယ်စားပြုသင်္ကေတအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးညံ့ဖျင်းပါကပြုမူဆက်ဆံသလား ဒါဟာအမေရိကန်အလံ desecrating အပေါ်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပင်မှုကိုထောက်ခံသူတွေအကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏ crux ဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ခံသူများကြောင့် desecration အလံသင်္ကေတတန်ဖိုးကိုထိခိုက်စေဆိုရမည်မှာ, ပြိုင်ဘက်က၎င်း၏တန်ဖိုးကိုပြီးသားထိခိုက်ပျက်ပြားစေခြင်းနှင့်ကသာသဘောမတူသောသူတို့၏အမူအကျင့်တို့ကပွနျလညျထူထောငျနိုငျသောလျက်ရှိသည်လျှင်သို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်း desecration သာဖြစ်ပေါ်ပြောကြပါတယ်။
အလံ၏ desecration တားမြစ်ပထမဦးဆုံးရှုထောင့်ပြဋ္ဌာန်းရန်မှပညတ္တိကျမ်းသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားသည်။ ဒါဟာဒုတိယတစ်ခုကြောင်း, စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ရှောင်သောကြောင့် Short-circuit ကိုထိရောက်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံဖို့အစိုးရအာဏာကိုတရားမဝင်အသုံးပြုမှုကို အမေရိကနှင့်အမေရိကန်ပါဝါ: အလံသင်္ကေတသောအရာကို၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. ။
အလံမီးလောင်ရာသို့မဟုတ် desecration အပေါ်ပိတ်ပင်မှုတစ်ခုလုံးကိုအမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဆက်သွယ်ရေးဖိနှိပ် သည့်ယုံကြည်ချက်နှင့်အများဆုံးအမေရိကန်များ၏သဘောထားများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုနေသောအမေရိကန်အလံဆီသို့ဦးတည်၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနှင့်သဘောထားများ၏။ ဒါဟာသင်္ကေတကိုယ်နှိုက်ကဒီမှာပြဿနာမှာဖြစ်သောအမေရိကအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့လျက်ရှိသည်သောအရာနှင့် ပတ်သက်. လူနည်းစုအမွငျမဟုတျဘဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးပါပဲ။
အတော်များများကဘာသာတရား, တစျခုသညျဘုရားသခငျ? ယုဒလူတို့, ခရစ်ယာန်, နှင့်မွတ်စလင်
အဘယ်ကြောင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီ Debate Theists ပါသလား
Philosopher Rene ဒေးကားတစ်အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုယ်ရေးဖိုင်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Montana-လူတန်းစား (BB-67 BB-71 မှ)
ဂျော်ဂျီယာဒေါက်ဂလပ်ဂျွန်ဆင်: Harlem Renaissance စာရေးဆရာ
Que hacer cuando la ဗီဇာမရေိ es rechazada por လိမ်လည်မှု
တိုးတက်မှုကို Fast Food စွန့်ပစ်, လျှော့ချ Reusing နှင့်ပြန်သုံးအပေါ်အနှေးဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ Freshman 15 ရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Bonnethead ငါးမန်း (Sphyrna tiburo)
ရော်နယ်အောင်နိုင်ရေဂင်အကြောင်းသိထားမှထိပ်တန်း 10 ဦးအရာ
Spider-Man ဇာတ်ကောင် - အံ့ဩခြင်းရုပ်ပြ
ရူပဗေဒအတွက် torque - အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာ
သင်သိပါဖို့လို 10 တိရိစ္ဆာန်အချက်အလက်
Todo sobre la licencia က de conducir မသန်စွမ်း indocumentados en ကယ်လီဖိုးနီးယား
အဆိုပါဂေါက်ကွင်း Mat Artificial မြက်ခင်းပြင်အလေ့အကျင့်ဖျာခုနှစ်တွင်ရှေ့သို့တစ်ဦးနဲ့ Big အဆင့် Is
အီတလီတွင်နှစ်ချက် Object ကို Pronoun
အမဲသားသို့မဟုတ် BS: ဂျေကိုးလ် vs. Diggy